I kuwana pfungwa chete kubva Pinda
kosha I kuwana pfungwa chete kubva Pinda
2 makore mwedzi 1 apfuura #516 by JanneAir15
Mhoro! Ndakacherechedza kuti kana ini akasika nyaya (seizvi) Handisi kuwana 10 pfungwa iri zvaunofanira kuwana paaisika nyaya kana zvimwe zvinhu izvozvo zvakafanana nokuisa mashoko kana pakupindura vanopfuura 150 vatambi kuti mumhanyi. Ndakatumira tikiti kuti mudonzvo asi ini kubvunza kubva pano. Saka aigona here ndapota ndibatsirei?
2 makore mwedzi 1 apfuura #540 by Colonelwing
Hongu handina kuona kuti zvakare ,, yokuFrance Forum nzvimbo anoita kupa pfungwa ...
Zvichida chinhu haasi kushanda Software mecanic zvakanaka.
2 makore mwedzi 1 apfuura #561 by Gh0stRider203
Ndichaedza nezvazvo mabhosi
2 makore mwedzi 1 apfuura #563 by Dariussssss
Kuva akatendeseka zvakakwana, I hatitombozvioni kuti ... ndizvo sei zvakakosha kwandiri. Ndakabva pano kuzochera zvakanakisisa ndege kuti FSX kumativi uye pano panguva Forum, kubatsira nezvinetso uye ufare iyi zvinoshamisa munharaunda iyo chaizvoizvo inokura, kufanana nerimwe zuva .... kwete kuunganidza zvimwe .. .
BTW, chii kushandiswa pfungwa idzodzo?
2 makore mwedzi 1 apfuura #564 by Gh0stRider203
KANA iwe kukwira zita renyu, uye ipapo Goto Pfungwa yangu muchaona izvi chidzitiro kuti unouya ..
Unganidza pfungwa kuti usununguke Jumbo magazini.
Jumbo 1 mwedzi chipeto = 1 000 Pts, 3 mwedzi = 2 000 Pts, 6 mwedzi = 3 500 Pts, 12 mwedzi = 5 500 Pts
2 makore 4 mazuva apfuura #611 by Kyrelel
Zvaizoratidza sokuti logon pfungwa asisiri kuitika, uye kuti "My Pfungwa" Ipfungwa chabviswa - zvino, tinofanira kubhadhara Jumbo? Ndakanga (Ndinofunga) anenge 2500 pfungwa.
1 gore 11 ago #656 by Rolando
Zvaizova zvakanaka kuti vawane ruzivo nezvazvo!
1 gore 11 ago #657 by Gh0stRider203
Rolando akanyora: Zvingava zvakanaka kuwana ruzivo pamusoro peizvi!
Hamuzivi chatinofanira kutaura, asi. Sezviri pachena isu hatisati tawana mapeji ekuita zvinhu pano. Ndiri kunge murima sezvauri.
1 gore 11 ago #658 by rikoooo
Ndakarema mapurisa nokuti takanga tine dambudziko guru rehutano naro, zvisinei, mune ramangwana tinogona kuzvishandisazve kana tikasangana nematombo.
Kana iwe uine huwandu hunopfuura 1000 hunoti unogona kundibvunza chinyorwa chekusununguka cheJumbo, saka pfungwa dzako hadzina kuparadzwa.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
1 gore 11 ago #659 by Gh0stRider203
Ndingadai akanga zvichida pedyo kuti zvaiva zvisina malfunctioning elnaz